Isiphepho esinemvula sizoqhubeka izinsuku ezimbalwa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isikhathi semvula sizohlala izinsuku ezimbalwa
Kulezi zinsuku sijabulele amazinga okushisa amnandi kakhulu nasentwasahlobo nasebusika. Lokhu kudalwe ukuthi kube khona i-anticyclone eyenza imimoya namakhaza kudlule cishe kulo lonke elaseSpain.
Manje, lapho umoya nokucindezela kwehla, Izinsuku ziyeza lapho siyoba namakhaza abandayo, izimvula, ngisho neqhwa futhi. Isiphepho sizolithinta kanjani iSpain?
1 Imvula ezothatha izinsuku ezimbalwa ezengeziwe
2 Okwakusasa ngoLwesibili
Imvula ezothatha izinsuku ezimbalwa ezengeziwe
Kulezi zinsuku izingcindezi zizoqhubeka zehle futhi lokhu kuzothinta umbuso wemvula nemvula okuthi enhlonhlweni enkulu izodala isimo sezulu esibi. Ngamaconsi engcindezi, imimoya ivame ukuhambisana nenqwaba yomoya obandayo owehlisa ama-thermometer.
Ngokusho kweState Meteorological Agency (Aemet), kuzoba nezinguquko ePeninsula nge ukufika kwenqwaba yomoya obandayo kusuka ezindaweni eziphakeme. Lapho izingcindezi zehla, kuba neziphepho futhi konke lokhu kuletha ukungazinzi komkhathi. Kulokhu, ukungazinzi kuzosabalala kulo lonke elaseMedithera futhi kumenyezelwe imvula eningi neqhwa, kuhambisana nemimoya enamandla.
Izinga leqhwa ekuqaleni lizoba ngamamitha ayi-800/1000 ukuphakama kuthi ntambama izokhuphukela kumamitha ayi-1.200 / 1.400. Imvula ephakeme kakhulu izokwenzeka eValencia, empumalanga eseCastilla La Mancha naseMurcia.
Kusasa, ngoLwesibili, izimvula zizothuthela eningizimu-mpumalanga yeNhlonhlo ngendlela enamandla kakhulu futhi amazinga eqhwa azoba ngaphezu kwamamitha ayi-1.200 / 1.500. Bazophinde babe nemimoya enamandla ehambisana nemvula.
Kusukela ngoLwesithathu yilapho isiphepho sizohlala eGulf of Cádiz futhi sizoba yinto ezinze kakhudlwana futhi ebuthaka. Izodala imvula ethile yize ibuthaka futhi ingahlala kuze kube uLwesihlanu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isikhathi semvula sizohlala izinsuku ezimbalwa
Basebenzisa imininingwane emikhulu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu
Kuyini ukushisa, kukalwa kanjani futhi kwenzelwa ini?